Norwey waxay leedahay taariikh qoto dheer leh marka la eego iskuulada iyo waxbarashada. Sannadadii 1700 dhaqaalaha dalku aad ayuu u hooseeyey. Iyadoo taasi jirto hadana waxbarashada waxa loo arkayey inay aad muhiim u tahay, markaa waxa la go’aamiyey in carruurta oo dhami iskuulka aadaan dawladduna bixiso.
Horaantii bilowgii 1700 kii waxa iskuul qasab ah oo lacag la’aan lagu soo rogey carruurta oo dhan, hablo iyo wiilalba. Ujeedada ka dambeysey waxay ahayd in dhammaan waxna la qoro waxna la akhriyo, si qofku keligii u akhrisan karo kitaabka masiixiga (bible). Sidoo kale dhammaan dadka waxa la baray diinta masiixiga.
Waqtigaas caadi ma ahayn in iskuulka la aado maalin kasta. Carruur badani waxay iskuulka tegi jireen maalin dhaaf ama dhawr todobaad sannadkii.
Waxa mar dambe lagu kordhiyey iskuulka maadado dhawr ah. Tusaale ahaan waxqorista, xisaabta iyo heesaha ayaa noqday maadado qasab ah bilawgii 1800.
1936kii ayaa la go’aamiyey in carruurtu dhammaan iskuulka aadaan ugu yaraan todoba sanno. Laga bilaabo 1997 kii waxa waajib laga dhigey toban sanno oo iskuul ah.
Siyaasiyiinta baarlamaanka ayaa ansixisey manhajka waxbarashada lagu isticmaalayo iskuulada dalka oo dhan. Sidaa darteed waxa iskuulada lagu dhigo oo dhami waa isku mid dalka oo dhan.
1739: Sharcigii koowaad ee iskuulka. Casharada qasabka ahi waxay ahaayeen barashada kiristanka iyo akhriska.
1827: Sharci iskuul oo cusub. Qoraalka iyo xisaabta qasab ayaa laga dhigay.
1936: Iskuul midaysan ayaa la hirgeliyey.
1969:Dugsi hoose/dhexe oo 9 sanno ah ayaa qasab laga dhigay.
1997: Dugsi hoose/dhexe oo 10 sanno ah oo qasab ah.
Waxa lagu barto iskuulka
Waxa lagu abarto iskuulku wuu isbedelayey 300 sanno gudahood ee aan lahayn iskuulka qasabka ah ee waddankan. 1700-dii ujeeddadu waxbarasho waxa ay ahayd in la siiyo ardayda aqoon ku saabsan diinta kiristanka. Ka dib waxbarashadii waxa ay noqotay xirfado kala duwan oo la siiyo ardayda sida qoraalka, xisaabta, cunto-samaynta, harqaanka/dawaarka iyo nijaaradda oo lagu kordhiyey iskuulka.
Maanta aad bay u fududahay in war la helaa. Carruurtu waxa ay isticmaalaan qalabka elektorooniga ah iyagoo aad u yaryar. Waa muhiim in carruurta la baro in ay helaan warbixin wanaagsan iyo in ay naqdin karaan warka warbixinta ay helaan. Carruurtu waa in ay bartaan in ay u fikraan si madax-bannaan. Waxay baranayaan in ay u isticmaalaan warbixinta ay helaan in ay ku xalliyaan mushkilado kala duwan, waxaanay baranayaanin ay wada shaqeeyaan. Waxa kale oo ay baranayaan aqoon xirfad akhris, qoraal iyo xisaab oo aasaasi ah.